Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL I-Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza indaba ephelele yeBhola Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Umdwebi". Umlando wethu we-Miralem Pjanic Wezingane kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi unembile, ukugoba ukukhishwa kwamahhala, kanye nokulethwa kwakhe kusukela ezimweni ezifile kodwa abambalwa abheka i-Bio kaM Miralem Pjanić ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UMalalem Pjanić wazalelwa ngosuku lwe-2nd ka-Ephreli 1990 eTuzla, eSFR Yugoslavia manje eyaziwa njengeBosnia neHerzegovina. Uzalwe nguyise, uFahrudin Pjanić (umdlali wezemidlalo wesithathu osebenzela uJobe) futhi nonina, uFatima Pjanić (umama wendlu ngesikhathi sokuzalwa kukaMislem).
Ngemva kwezinyanga eziyisithupha uMilllem ezalwa, umndeni wakhe wathuthela eLuxembourg ukuyofuna amadlelo aluhlaza, ukuthutha okwathi kamuva kwaba yisinqumo esibalulekile esasindisa impilo yomndeni njengokuzalwa kwakhe ezinyangeni ngemva kokuhamba kwawo, ebanjwe impi eyayiyibona ukulahlekelwa kwempilo nokubhujiswa kwezakhiwo.
Ukuhlala endaweni yokuhlala yabo entsha eLuxembourg, uFahrudin Pjanić waqhubeka edlala ibhola futhi wathatha uJobe njengomsebenzi wefektri. Wenza futhi uMillem osemncane amhambisane naye ukuze aqeqeshe ukuze amthole ibhola, ekholelwa ukuthi indodana yakhe ingahamba kangcono emdlalweni.
Inkolelo kaFahrudin yayingenakho ukukholwa okuyisimungulu kodwa isenzakalo esasibona ngesikhathi sazo zokuhamba iholide kusuka eLuxembourg kuya eBosnia. Eminyakeni ethile kamuva uFahrudi wayezokhumbula ukuthi:
U-Young Miralem angeke aphuthelwe ithuba lokudlala ibhola, ikakhulukazi ngesikhathi sokuvakasha e-Luxembourg ukuya eBosnia uma engenandaba nokufunda. Uvame ukuchitha amahora adlala futhi egijima ibhola.
Ekhuluma ngokuqhubekayo, wabelane ngalokho ayezokuphila ukuze akhumbule njengokutholwa okumangalisa mayelana nokuphakama kwesifiso sikaM Miralem sebhola
Kukhona loluhambo oluthile esifike ngalo ebusuku futhi ngilindele ukuthi ahlale elele nje ukuze ahlaziywe yimisindo yokugubha egalaji. Ukulwa nobaba sasiya egalaji elindele ukuzobamba izigebengu. Kodwa sathola ngokucophelela ukuthi uMirlem wayesebenza.
Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuthi uM Miralem (oneminyaka engu-7) abhalise eqenjini lokuqala lokuqala eLuxembourg, I-FC Schifflange 95 lapho azibonakalisa khona njengelinye ilanga le talent kanye nokusebenza kanzima, i-combo ephelele engeke iboniswe yi-football start-ups.
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Buildup
KwakuyiC FC Schifflange ukuthi uMarklem wenza imisebenzi ehlaba umxhwele eyenza ama-scouts avela emaqembu amaningana aseBelgium, Dutch kanye naseJalimane. Uqondiswa ubaba wakhe ngokuqondisa u-Guy Hellers wangaphambili waseLuxembourg. I-Miralem ihlelwe yiqembu leFrance, iMetroz.
UMalalem, owayeseneminyaka eyishumi nambili e-FC Metz wabheka ukuthi leli qembu lizoba yisidingo sokudumisa. Ngenxa yalokho, wazama ukuphakamisa amaqembu amasha amaqembu kuze kube yilapho evikelekile eqenjini lokuqala iqembu lakhe futhi wenza i-debut yakhe eneminyaka engu-7 ubudala.
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Ngemva kokuzimisela eqenjini lokuqala leCom Metz, uMillem wathuthela eLyon lapho ehola khona umgomo weqembu elabonile I-Real Madrid ixoshiwe ku-2009 / 2010 Champions League eBernabeu.
Uphinde wasiza ohlangothini lwakhe ekufinyeleleni ama-semi-finals womkhankaso ofanayo. Ngemva kwalokho wathuthela eRomani e-2011 lapho ezimisela khona njengomphakathi oyingqayizivele eSerie A. Ngaphambi kokufika kuJuventus Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
UMalalem Pjanic ubelokhu ephethe intombi yakhe, uJosepha waseNice, eFrance. Ubuhlobo babo buveza indodana, u-Edin owazalwa ngo-2014.
Ngesinye isikhathi ku-2013, kwakukhona amahemuhemu amshiya uJoseph kumlobi wezindaba, uGorgia Rossi owaqala ukuphola eMilan. Kodwa-ke, amahemuhemu awazange asungulwe egunyeni elihle njengoba uMarklem evuselela ubuhlobo bakhe noJosepha.
Njengasesikhathini salokhu okuthunyelwe, okuncane akuyazi ngokuphathelene nobuhlobo bukaM Miralem ne-wagesi yakhe entsha uFrancesca.
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Inkolo Nemfundo
Uma kuziwa enkolweni, uM Miralem Pyanich ubonisa ukuthi ungumSulumane. Isimo sakhe sezenkolo samukelwa yibalandeli bakhe base-Italy ukuthi naphezu kokuba ikakhulukazi amaKatolika aziwa ngokubekezela kwabo kwezenkolo.
Okufanelekile ukukhuluma ukuthi uM Miralem wenze imizamo yokuzihlakulela ngokwengqondo ngokutadisha imfundo yezemidlalo nezempilo eNyuvesi yaseSarajevo. Indlela engavamile ukunyathelwa yi-football geniuses.
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Izindaba zobuntu
UMalalem Pjanić uye wachazwa ngabaningi njengendlela esebenza kanzima okuyinto eyinhloko yokuphumelela komsebenzi wakhe.
Ngomzimba, unokuphakama kwe-1.78m, amehlo we-hazel futhi iye njalo ibonakale igqoke intshebe kusukela ezintabeni kuya kufomu eligcwele.
Ukuzitholela konke, iBosnia iyi-polyglot ekhuluma okungenani izilimi ezinhlanu: isiNgisi, isiNtaliyane, isiJalimane, isiFulentshi nesiTapiya, kodwa ngokumangalisa akukhulumi ulimi lwakhe lwaseBosnia.
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Isizathu Esiphezulu Sesidlaliso
I-Pjanic ngenxa yokudala nokulawula kwakhe ibhola ibizwe ngegama elithi "Umdwebi". Umsunguli unomsebenzi okhethekile ekudaleni abasiza ukuthi abe ngumsizi ophezulu wokusekela ku-Serie A kulezi zinsuku ezimbili ezedlule.
Empeleni, inkanyezi yangaphambili yaseBrazil uJuninho yamchazela, ku-2015, njengowomhlaba omkhulu wokukhahlela mahhala emhlabeni.
"I-2Mire inekhwalithi engavamile. Kungenzeka ukuthi yiyona engcono kakhulu yokukhipha mahhala emhlabeni namuhla. Cha, ngiyaqiniseka ngakho - nguye ongcono kakhulu ".
Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Socia Media
UMalalem Pjanić unempilo yezokuxhumana enempilo njengoba kuboniswa ngemisebenzi ekhanyayo kuma-media media. Ukuqala nge Twitter, inkanyezi yebhola inabalandeli abangaphezu kuka-371 namathebhu akhe amakhulu ngokusekelwe emsebenzini.
Okufanayo kungashiwo ngaye Ikhasi le-facebook lapho enabantu abalandeli abayizigidi eziyisikhombisa kanye nokuthi Instagram lapho enabalandeli abangaphezu kwezigidi ze-2.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Miralem Pjanić yezingane yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi!
UDaniel Rugani Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
URoberto Pereyra Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-Giorgio Chiellini Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Septhemba 28, 2020
I-Sami Khedira Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts